BMW सक्रिय हाइब्रिड, जर्मन कम्पनीको नयाँ 'e-बाइक' ग्याजेट समाचार
स्कूटर अब छैन शहरी गतिशीलता को लागी सबै भन्दा राम्रो समाधान। यस्तो देखिन्छ कि यस अवधारणालाई BMW कम्पनीले राम्ररी बुझ्न सकेको छ। र यसको भर्खरको प्रक्षेपण धेरै बढी पारिस्थितिक र स्वस्थ वाहनमा केन्द्रित छ। यो बारे मा छ BMW सक्रिय हाइब्रिड, सहयोगी पेडिलिंगको साथ एक साइकल। त्यो हो, एक इलेक्ट्रिक बाइक वा ई-बाइक.
BMW सक्रिय हाइब्रिड एक हो साइकल ट्र्याकिंग मा केन्द्रित एक डिजाइन संग; यो ध्यान दिएन छैन कि यो एक ब्याट्री समावेश एक वाहन हो। धेरै जसो जर्मन कम्पनीको सबै प्रक्षेपणहरुमा हुने गर्छ, यो पर्यावरणीय सवारी राम्रो गुणको सामग्रीले डिजाइन गरिएको हो। उदाहरण को लागी, यसको फ्रेम hydroformed छ। यसको साथ हामी ती स्थानहरूमा वजन घटाउन सक्षम हुनेछौं जहाँ यो आवश्यक छैन र यसरी सेटमा कम वजन प्राप्त गर्न।
अर्कोतर्फ, BMW सक्रिय हाइब्रिडमा थपिएको ब्याट्रीको क्षमता 504०XNUMX WH छ। यसको इलेक्ट्रिक मोटर, जुन तल्लो कोष्ठकमा अवस्थित छ, N ० एनएमको टार्कको साथ अधिकतम २ 250०W को प्रस्ताव गर्दछ। यो सबैले प्रयोगकर्तालाई पुग्न अनुमति दिन्छ २ km किमी / घन्टा को शीर्ष गति "होशियार हुनुहोस्, किनकि यो अधिक हुन सक्दछ, तर यो फ्याक्ट्री सीमित छ।" त्यस्तै, र धेरै मा देखा पर्दछ ई-बाइक, प्रयोगकर्ता प्याडलिंग मा सहयोग को डिग्री छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। योसँग levels स्तरहरू हुनेछन्: ECO स्तर (%०% सहायता) देखि TURBO मोड (२4% सहायता) मा। अरु के छ त, एकल चार्जमा प्राप्त गर्न सकिने दायरा १०० किलोमिटरसम्म पुग्छ.
त्यस्तै गरी, BMW सक्रिय हाइब्रिडसँग एक micUSUSB पोर्ट र ब्लुटुथ जडान छ कुनै पनि समयमा आफ्नो स्मार्टफोन जडान गर्न सक्षम हुन। अन्तमा, यस BMW सक्रिय हाइब्रिड ब्रेक डिस्क छ; यसको टायर कन्टिनेन्टल ब्रान्डले हस्ताक्षर गर्यो; काठी सेलेल रोयल हो र पछाडि स्थिति प्रकाश एलईडी छ। यो इलेक्ट्रिक बाइकको मूल्यमा तपाईंको हुन सक्छ 3.400 यूरो र मार्फत उपलब्ध हुनेछ अनलाइन स्टोर कम्पनी को।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » BMW सक्रिय हाइब्रिड, जर्मन कम्पनीको नयाँ 'e-बाइक'